Dhaqaalaha oo soo roonaanaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Volovo o soo bandhigtay faa,iidada ay gaartay oo ay shaqaaleyn karto shaqaale cusub.Foto: Björn Larsson Rosvall/Scanpix.
Dhaqaalaha oo soo roonaanaya
La daabacay fredag 23 juli 2010 kl 10.23
Xiisaddii dhaqaale ee farro ba,an ku heysay shirkadaha waa weyn ee dalkan Iswiidhan ayaa haatan u muuqda iney sii dhamaaneyso, islamarkaasina ay soo bidhaameyso rajo wax wanaagsan. Sidaasi waxaa lugu sheegay war murtiyeed lix bilood ah oo toddobaadkan gudihiisa la soo saaray.
Shirkadda Volvo ee soo saarta basaska iyo baabuurta xaamuulka ayaa soo bandhigtay faa'iido dhan 4.5 milyaardi oo karoonka lacagta dalkan Iswiidhan ah oo ay gaartay bilihii abriil, maajo iyo juunyo ee sanadkaan. Taasina waa mid loo bar bar dhigayo qasiirhii gaareyey 7.7 milyaardi oo ay isla sanadkii hore xilligaas oo kale gaartay.
Iminka ayaa la shaaciyey in Vilvo ay shaqaaleyn karto shaqaale gaaraya 2000 tan iyo inta laga gaarayo dhamaadka sanadkan. Sidaasina waxaa sheegay Leif Johansson oo ah madaxa urrur shirkadeedka isku tagay ee Volvo.